နယ်စပ် ဘုရားသုံးဆူဂိတ် ပြန်ဖွင့်ရေး ထိုင်းစစ်တိုင်းမှူး လာရောက် လေ့လာ
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း > နယ်စပ် ဘုရားသုံးဆူဂိတ် ပြန်ဖွင့်ရေး ထိုင်းစစ်တိုင်းမှူး လာရောက် လေ့လာ
နယ်စပ် ဘုရားသုံးဆူဂိတ် ပြန်ဖွင့်ရေး ထိုင်းစစ်တိုင်းမှူး လာရောက် လေ့လာ	ဟင်္သာနီ (မွန်မြေ)	| ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၂၂ မိနစ်	စံခလပူရီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်၊ မတ်လကတည်းက ပိတ်ထားရသော ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ရှိ ဘုရားသုံးဆူဂိတ် တရားဝင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းတိုင်းခေါ် အမှတ် (၁) စစ်တိုင်းမှူး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဖိုင်းဗုန် ခွန်ချိုင်ယာ နှင့် လက်အောက်ခံ တပ်မ (၉) တပ်မှ တပ်မမှူး ဗိုလ်ချုပ် ဖိုင်းလစ် ထောင်းမာအင် တို့သည် ဗုဒ္ဓဟူး နေ့လည် ၁၂ နာရီခွဲက ဘုရားသုံးဆူ မြို့သို့ လာရောက် လေ့လာခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ ထိုင်းစစ်ဘက် အရာရှိ ကြီးများသည် နယ်စပ်ဂိတ်သို့ မသွားရောက်မီ ဘန်ဂလို တောင်၌ ဒေသခံ ထိုင်းစစ် ဘက် အရာထမ်းများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး အမှုထမ်းများအား တွေ့ဆုံကာ နှစ်နိုင်ငံ တရားဝင် သဘောတူညီမှု မရသေး သည့် နယ်စပ်မျဉ်း ကိစ္စနှင့် နယ်စပ်ဂိတ် တရားဝင် ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက် အခက်အခဲများကို စစ်ဘက် အစီရင်ခံစာ ဖတ်ကြားကာ ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့သည်။“ကျနော်တို့ ထိုင်းမြေပုံ ဆွဲထားချက်အရ ဘုရားသုံးဆူဟာ လက်ညှိုး သဏ္ဍာန် လုံးဝန်း ရှည်လျားပြီး တည်ရှိနေပါ တယ်။ မြန်မာဘက်က အတည်ပြု ပြောဆိုနေတဲ့ မြေပုံကတော့ တြိဂံပုံ ရှိပါတယ်။ ဒီပြဿနာကြောင့် အခုထိ နယ်စပ်မျဉ်းကို တရားဝင် သတ်မှတ်လို့ မရသေးပါဘူး” ဟု ထိုင်းစစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။နယ်စပ်ဂိတ် တရားဝင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်အတွက် အဓိက ကြုံတွေ့နေရသည့် ပြဿနာကို ဘန်ဂလိုတောင် ရှင်းလင်းပွဲ၌ မဇ္ဈိမ က မေးမြန်းရာ “ဒါက အင်မတန် ပြောရခက်တဲ့ အနေအထားပါ။ တဖက်မှာ မြန်မာအတွက် အကျိုးစီးပွား ရှိသလို၊ တဖက်မှာ ဒီဒေသ အခြေစိုက်တဲ့ တိုင်းရင်းသား တပ်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒီနယ်မြေဟာ အစိုးရ ထိန်းချုပ်မှု အာဏာသက်ရောက်မှု အားနည်းတယ်ဆိုတော့ အကျိုးအမြတ်တွေဟာ တိုင်းရင်းသား တွေဆီသာရောက်ရှိနေကြတဲ့ အနေအထားပါ။ ဒါကို အစိုးရက ထိန်းချုပ်ချင်ပုံလည်း ရတယ်” ဟု တပ်မမှူး ဗိုလ်ချုပ် ဖိုင်းလစ် ထောင်မာအင် က ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။ထို့နောက် ထိုင်းတိုင်းမှူးသည် နယ်စပ်ဂိတ် တရားဝင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာ အရာရှိများနှင့် ဂိတ်တွင် ၁ဝ မိနစ်ခန့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့သည်။“ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဒါကို တရားဝင် ဖွင့်နိုင်ဖို့က အာဏာ မရှိပါဘူး။ နေပြည်တော် ဒါမှ မဟုတ် တိုင်းအမိန့်နဲ့မှ ရမှာပါ”မြန်မာ စစ်ဘက် အရာရှိများက ထိုင်းစစ်တိုင်းမှူး အမေးကို ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။မြန်မာဘက်မှ ဘုရားသုံးဆူ မြို့ရှိ ဗိုလ်ကြီး အောင်ဗိုသက် (IO)၊ တပ်ကြပ်ကြီး ဝင်းဇော်မင်း၊ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသိန်းထွန်း နှင့် မြို့မိမြို့ဖ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ဦးအေးမြင့် တို့က နယ်စပ်ဂိတ်၌ ၁ဝ မိနစ်ခန့် ရပ်၍ ထိုင်းတိုင်းမှူးနှင့် အလွတ်သဘော ဆွေးနွေးစဉ်၌ ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ “ကျနော်တို့အနေနဲ့ကရော၊ ဒေသခံ ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကလည်း ဒါကို တရားဝင် ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်စေချင်ပါတယ်” ဟု မြို့နယ်မှူး ဦးသိန်းထွန်း က ပြောသည်။ထိုင်း စစ်တိုင်းမှူးသည် လာမည့်နှစ်၌ မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက် လည်ပတ်ကာ ထိုဂိတ် တရားဝင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး အတွက် ဆွေးနွေးမည်ဟု ဆိုသည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ဘုရားသုံးဆူ နယ်စပ်ဂိတ်ကို ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့က မြန်မာဘက်ရှိ DKBA တပ်မှ ထိုင်းနယ်ခြားစောင့် တပ်သား (တော်မော) နှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ထိုင်းဘက်မှ ပိတ်ပင် ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ထို တပ်သား နှစ်ဦးကို DKBA ဘက်မှ တလကြာ ထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာ အစိုးရ ဖိအားပေးမှုဖြင့် မဲဆောက်၌ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက်ပိုင်း၌ ထိုင်းဘက်မှ တရားဝင် ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် လိုလားခဲ့သော်လည်း ယနေ့အထိ တရားဝင် ဖွင့်လှစ်နိုင်သေးခြင်း မရှိဘဲ နားလည်မှုဖြင့်သာ ကုန်စည်များ စီးဆင်း သွားလာလျက် ရှိကြသည်။ဘုရား သုံးဆူမြို့ ထိုင်းဘက်ခြမ်းရှိ စက်ရုံ အလုပ်ရုံပေါင်း ၄ဝ ခန့်သို့ မြန်မာဘက်ခြမ်းမှ အလုပ်သမားများ တနေ့လျှင် ပျှမ်းမျှ ၄,ဝဝဝ ဦးခန့် နေ့ချင်းပြန် သွားရောက် အလုပ် လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ အချို့နေ့များတွင် အချိန်ပိုဆင်းကာ အလုပ်လုပ်ကြရပြီး နယ်စပ် ဖြတ်ကျော်ကာ မြန်မာပိုင် ဘုရားသုံးဆူ မြို့ဘက်သို့ ပြန်ကြရသည်ဟု သိရှိရသည်။
သုံးနိုင်ငံလမ်းမကြီး အမြန်ပြီးရန် အိန္ဒိယ ဝန်ကြီးချုပ် နှိုးဆော်	ထားဝယ် စီးပွါးရေးဇုန် ဧရိယာ မြန်မာ လျှော့ချလိုဟု ထိုင်းသတင်းစာဆို	ထိုင်းက မီးဖိုချောင်၊ မြန်မာက ဥယျာဉ်ခြံဟု ထိုင်းကုန်သွယ်ဥက္ကဋ္ဌဆို	လက်နက်မှုဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံသား ရှစ်ဦးကို ထောင် ၇ နှစ်စီ အမိန့်ချ	ထိုင်းဝန်ကြီး ခရီးစဉ်အတွင်း ထိုင်းအကျဉ်းသားအရေး ဆွေးနွေးမည်	လက်နက်မှု၊ မူးယစ်မှုများဖြင့် ထိုင်းများကို မြန်မာတရားရုံးက ထပ်မံစစ်ဆေး	သောင်တင်နေသည့် မြန်မာလုပ်သားများ မြဝတီ ပြန်မည်	Who is Online
We have 108 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved